China High-ọkwa Lancome usoro nke akpụkpọ skincare mbukota iko karama factory na suppliers | Jiamei
High-ọkwa Lancome usoro nke skincare ikom packing karama
Nka: Screen ebi akwụkwọ, na-ekpo ọkụ stamping, frosting, labeelu, na-ebi akwụkwọ na agba na ndị ọzọ
Karama ude: 30g, 50g
Mee mmiri mmiri na karama mmiri: 40ml, 80ml, 100ml, 120ml
Ojiji: Ude, mee mmiri na ude mmiri
Lancome usoro nke ụmụ nwoke skincare mbukota karama
Nchịkọta Lancome Cosmetics for Men bụ otu n'ime obere ihe ịchọ mma dị maka ụmụ nwoke.Ejiri ya bụ iko dị elu, nke na-ekewa ihe ịchọ mma site na mpụga ma gbochie evaporation na mmetọ nke mmiri. A na-eme iko ala ya ka ọ dị ntakịrị. Biko kwenyesie ike, ngwaahịa ụlọ ọrụ anyị kwekọrọ n'usoro mba, ọ bụghị naanị na ọ nwere ọrụ dị ike, ihe ahụ na-echekwa gburugburu ebe obibi ahụ. Mmiri na-eme mmiri na karama ude mmiri dabara na mgbapụta na mkpuchi, ma karama ude na aka-wetara gasket na mkpuchi.
Nkọwapụta nke karama mmiri ara ehi bụ 40ml, 80ml, 100ml na 120ml.Cream karama dị na 30g na 50g.Ọnọdụ ụlọ ọrụ anyị nwere mbipụta ihu igwe, stampụ ọkụ, ntu oyi, akara, agba agba na usoro ndị ọzọ, anyị ga-e copyomi foto ị nye, iji hụ na afọ ojuju gị.
1. Ọnụahịa: Ọnụahịa dị na peeji ahụ bụ mkpuchi karama + mkpuchi, ewepu usoro. Biko kpọtụrụ ndị ahịa maka nkwupụta okwu akọwapụtara
2. Ihe nlele: Ihe nlere bu aru aru na uzo.
Ọ bụrụ na ịchọrọ, anyị nwere ike ịnye gị ihe nlele ahụ maka gị iji kwenye na nke ikpeazụ. N'ihi na anyị nwere akwụkwọ ngebichi, ntanye ọkụ, ntu oyi, akara, agba agba na usoro ndị ọzọ, yabụ anyị nwere ike ịhazi okwu na usoro dị iche iche maka gị. kpọtụrụ ndị ahịa maka nkọwa. Mgbe nke ahụ gasịrị, ị na-akwụ ụgwọ nkwụnye ego ahụ, anyị ga-ewepụkwa ngwaahịa ahụ n'ọtụtụ dị ka sample.N'ikpeazụ, zitere gị ngwaahịa ahụ ma nyefee gị ka ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ mgbe ịnabata gị.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko kpọtụrụ anyị. Anyị na-ele anya ịmebe mmekọrịta gị na gị!
Nke gara aga: Mbukota ịchọ mma na-eme ka iko iko ude mara mma na ite dị ọcha
Osote: Personnal Skincare Skew ubu iko ịgba karama na ite nke ịchọ mma karama setịpụrụ maka N'ogbe